अब सजिला फिल्म खेल्दिनँ
२०७५ भदौ २३ शनिबार ०८:३७:००
अभिनेता अभिषेक बच्चनले आफ्नो करिअरको शुरुवाती दिनमा पूरै एक दर्जन फ्लम फिल्मको सामना गरे । फ्लपको लामो सूचीबीच ‘युवा’, ‘एलओसीः कारगिल’ र ‘रन’को सफलताले थोरै राहत पक्कै मिल्यो तर त्यसले कुनै ठोस प्रभाव पारेन । बारम्बार फ्लप भइरहेका फिल्मका कारण चिन्तित अभिषेकले फिल्मबाट केही समय ‘ब्रेक’ लिए । अहिले अनुराग कश्यपको ‘मनमर्जियाँ’बाट उनी पुनः ठूलो पर्दामा देखिन लागेका छन् । १४ सेप्टेम्बरमा प्रदर्शन क्रम हुने यो फिल्ममा तापसी पन्नु र विक्की कौशल मुख्य भूमिकामा देखिनेछन् । यसमा अमित त्रिवेदीको संगीत छ । ‘तनु वेड्स मनु’ र ‘रान्झना’ निर्माण गरेका आनन्द एल रायले ‘मनमर्जिया’मा पैसा लगानी गरेका छन् । अभिषेकको जबर्जस्त कमब्याक ठानिएको ‘मनमर्जिया’सँगै उनको जीवनबारे ‘नवभारत टाइम्स’ले गरेको कुराकानीको अनुदित अंशः
‘युवा’, ‘गुरु’, ‘ब्लफमास्टर’ र ‘बन्टी और बब्ली’जस्ता फिल्ममा तपाईंको भूमिकालाई लिएर खुबै प्रशंसा भयो । तर, त्यसपछि पनि तपाईंका दर्जनभन्दा बढी फिल्म चलेनन् । आफ्नो यो असफलताको कारण तपाईंलाई थाहा छ ?
यदि यो प्रश्नको उत्तर फिल्म उद्योगका कसैसँग पनि हुन्थ्यो भने उनीहरूले हिट फिल्ममात्रै बनाउँथे । हामीले प्रयास गरिरहनुपर्छ । हामीले काम गर्दा त्यो काम ठीक र सही छ भन्ने ठानेरै मेहनत गरिरहेका हुन्छौं । अरुले त्यही कामलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहै हुँदैन । हामीले आफ्नो जीवनमा यो कुरा जान्नु जरुरी छ— जुन कुरा माथि जान्छ, त्यो तल पनि झर्छ । हामीले गर्न सक्ने भनेको मेहनत हो । पहिलेको फिल्ममा के गल्ती भयो, त्यसलाई सुधार्न प्रयास गर्ने हो । त्यो गल्ती सुधारेर आगामी फिल्ममा कसरी बढीभन्दा बढी प्रभाव पार्ने भनी सोच्ने हो । हामीलाई सफलताको कुनै सिधा प्रक्रिया थाहा हुँदैन । मैले बुझेसम्म कुनै पनि कलाकारलाई त्यसको छनक हुँदैन । यो सबै दर्शकको हातमा हुन्छ ।
पिता (अमिताभ बच्चन)सँग तपाईंको काम धेरै तुलना हुँदा त्यसको बोझका कारण आफू असफल भएको जस्तो लाग्यो कहिल्यै ?
बुवासँग तुलना गरेर म असफल भएँ भन्ने कुरामा मलाई कत्ति विश्वास छैन । यदि बुवासँग तुलना गरिएको हो भने पक्कै मभित्र केही न केही हुनुपर्छ ।
फिल्म फ्लप भएपछि एक–अर्काले हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति बाक्लो छ । तपाईं त्यसमा पर्नुहुन्छ कि नाइ ?
मैले गरेको काम राम्रो हुँदाहुँदै फिल्म हिट भएन भने पनि मेरो गल्ती हो । यदि मेरो काम धेरै नै राम्रो भएको छ भने फिल्म पनि राम्रै हुनुपर्छ । जुन फिल्मको व्यापार राम्रो रह्यो, ती फिल्मको श्रेय मैले पनि लिएको छु । जति असफल भएका छन्, तिनीहरूको श्रेय पनि मैले नै लिएको छु । फिल्म सधैं टिमवर्क हो । फिल्म राम्रो चल्यो भने त ठीकै छ । यदि राम्रो भएन भने त्यसबाट सिक्ने हो । गल्ती सुधार्दै अघि बढ्ने हो । फिल्म फ्लप भएपछि एक–अर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रवृत्ति मलाई मन पर्दैन ।
सफलताले मान्छेलाई विनम्र बनाउँछ । असफलताले साहस सिकाउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले दुवै अवस्थाबाट सिक्नुपर्छ । सिकेनौं वा सिक्न चाहेनौं भने हामीले पक्कै केही गलत गरिरहेका छौं ।
फिल्म सफल वा असफल हुनुले कलाकारलाई कुन हदसम्म असर पार्छ ?
फिल्मको सफलता वा विफलताबाट यो उद्योगका धेरै मान्छे धेरै प्रभावित हुन्छन् । जीवनका महत्वपूर्ण यी दुई अवस्थाले तुरुन्तै मान्छेको दृष्टिकोण बदलिदिन्छन् । भोलि मेरा १० फिल्म हिट भए भने हरकोही मलाई साइन गराउन लाइन लाग्छन् । तीन वटामात्रै फिल्म फ्लप भए भने कसैले फोन उठाउँदैनन् । ठूलाठूला सुपरस्टारको हकमा पनि यस्तो भइरहन्छ । यो नयाँ कुरा होइन । त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा लिनु हुँदैन । किनभने समग्रमा यो एक व्यापार न हो ।
यी सफलता/असफलताबाट सिकेर तपाईंले भोलिको आफ्नो फिल्मी जीवन कस्तो देख्नुभएको छ ?
अब मैले कुनै निश्चित फिल्ममा धेरै नै सहज महसुस गरें भने कामै गर्दिनँ । आफ्नो सुविधाअनुसार काम गर्दा मैले थुप्रै असफलता हात पारेको छु । धेरै नै आरामदायी माहोलमा काम गर्दा ठीक हुँदो रहेनछ । अब म आफ्नो सुविधाअनुसार काम गर्न चाहन्नँ । यो फिल्म त आँखा चिम्म गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने लागेका प्रोजेक्टमा म हातै हाल्दिनँ । म यस्ता कामबाट टाढै बस्ने योजनामा छु । अब म यस्तो काम गर्न चाहन्छु, जसले मलाई साँच्चै गम्भीर र भयभीत बनाओस्, मलाई चुनौती देओस् ।